Dhonza-Pasi Kicheni Faucet Brushed Nickel
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / Dhonza-Pasi Kicheni Faucet Yakakweshwa Nickel
Chidimbu ichi chine kutaridzika kwakaringana, uye neakanyanya arc 360 ° swivel gooseneck spout pesvedzero pane inoshamisa kunzwa. Iyo brushed nickel coloration inoenderana-kumusoro nekicheni yega yega uye yakajairika kicheni
Faucet iyi ine inobvisirwa sprayer, inopihwa nerukova uye spray mode. Stream modhi ine nyoro iri kuuya mvura, inogona kugadzirirwa kuzadza magaba nehari, kunyangwe kugeza maoko. Iyo yekudhonza pasi tambo ine makumi maviri neshanu - inosvika nzvimbo inounza inonyanya kubatsira iwe kwauri kuburikidza nemazuva ese usuage.
Iyo yekumwaya modhi ine yakasimba iri kuuya mvura iyo inogona kungo pedza iwo ma particles ari mundiro. chipfapfaidzo chinogona kudzoserwa otomatiki zvinyoronyoro iwe uchichichimura.
Swivel Dhizaini: Iyo swivel dhizaini ine mapatya kugona inogutsa yakawanda inoda mune zvekugadzirira zviito.
Dhata Imwe na: Iyo inobata pamwe nekupa nyore manejimendi pamusoro pekupararira uye tembiricha chaizvo.
Strong Brass: Yakasimba yendarira chivakwa inovimbisa inogara-kwenguva kukosha.
Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: mubato mumwe unoburitsa, sprayer kicheni singi pombi
WOWOW Kicheni Faucet Inotengeserana Sprayer